အရသာရှိသောရေ - သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ »ရေချို - သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
ရေချို - သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
Tele RELAY တစ်ခု 20 အောက်တိုဘာလ 2019
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်ရှိအတွက်ကောင်းစွာဓါတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းထားရန်အရေးကြီးပုံကိုမည်သူမျှသံသယမရှိကြပါ။ အစားအစာလုပ်ငန်းကမရှိတော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအချိုရည်အသစ်များပွားများလာသည်။ သူတို့တွင်ရေကိုအရသာရှိသည်။
နွေရာသီသည်ပူလာသည်နှင့်အမျှ, မြင့်မားသောအပူချိန်အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့သတိပေးချက်များပိုပိုပြီးအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာနေကြသည်။ နေရောင်မှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါ၊ နေ့ခင်းဘက်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ပါနှင့်။ အေး။ အေးအောင်နေပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိကြ၏ တစ်နေ့ရေ ၂ လီတာလောက်သောက်သင့်တယ်အဓိကကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များကတည်ထောင်အဖြစ်။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှင့်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာရေဖြစ်သည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်လူအများစုအတွက် အမြဲတမ်းမလွယ်ကူ ဒီပမာဏကိုသောက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအရသာမရှိဘူး၊
ထို့ကြောင့်စပိန်နိုင်ငံကဲ့သို့သောနိုင်ငံမျိုးတွင်အချိုရည်များ၊ ဖျော်ရည်များသို့မဟုတ်စွမ်းအင်အချိုရည်များကဲ့သို့သောအခြားအချိုရည်အမျိုးအစားများကိုများပြားစွာစားသုံးကြသည်။ ညွှန်ပြအဖြစ် စပိန်နိုင်ငံရှိအစားအစာစားသုံးမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ, 2017 အတွက်, စပိန်တစ် ဦး ကိုလောင်ပါပြီ စုစုပေါင်း2109,58 အချိုရည်လီတာသန်းတစ်နှစ်လျှင်လူတစ် ဦး လျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 49,43 လီတာဖြစ်သည်။
ပြproblemနာမှာများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ပါ ၀ င်သောသကြားပမာဏများစွာပါ ၀ င်သည်။ အသံများတိုးများလာနေသည် ကျွန်ုပ်တို့အစားအစာတွင်သကြားဓာတ်များများပါ ၀ င်မှုနှင့် ၄ င်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအကြောင်းသတိပေးပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမျိုးအစားများကိုလျှော့ချရန်အထူးဂရုပြုရမည်။
Read more: အဘယ်ကြောင့်ရေဓာတ်ကိုကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသနည်း
ရေချို - ၎င်း၏အားသာချက်များ
ငါတို့ကအရသာရှိတဲ့ရေအကြောင်းပြောရင်သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ နောက်ထပ်ဘာမျှမ ဤကိစ္စတွင် ၎င်းသည်ရေကဲ့သို့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးရေသောက်ရန်အကြံပြုသည်။
အရသာရှိသောရေသည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် ရေဓာတ်ကိုပိုမိုအရသာရှိစေရန်၊။ ထိုအရာအလုံးစုံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာတစ်လမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် အချိုရည်များစားသုံးမှုကိုလျှော့ချကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်စေသောအခြားအချိုရည်များကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူသည်ငါတို့ကိုပင်အပျော်အပါးပေးနိုင်သည်။
ရေနှင့်သစ်သီးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောစုံတွဲသည်အလွန်ကျန်းမာသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်စျေးကွက်ရှိအရသာရှိသည့်ရေအားလုံးသည်၎င်းတို့အား ဦး စားပေးပုံမဟုတ်ပါသူတို့မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။
စျေးကွက်တွင်တွေ့ရှိသောအရသာရှိသောရေအချို့၏တံဆိပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည် အများဆုံးသကြားသို့မဟုတ်အခြားဆံ့ ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ် သူတို့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအကြား။
သူတို့ထဲကတချို့ဟာဓာတ်သတ္တုရေထက်အချိုရည်နဲ့ပိုတူတယ်။ ၎င်းတို့တွင်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်လျှင်သကြား ၂-၃ လက်ဖက်ရည်နှင့်ညီမျှသည်။ တချို့ကတောင်မှကန့်သတ်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်WHO က သောက်တစ်ခုတည်းလုပ်နိုင်တဲ့၌တည်၏။
Read more: အနုတ်လက္ခဏာကယ်လိုရီအစားအစာများနှင့်အတူကိုယ်အလေးချိန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ရေ၊ သစ်သီးများသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတချို့အတွက်, ပါဝင်ပစ္စည်းများများ၏စာရင်းကအရမ်းရှည်နိုင်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်သကြားသို့မဟုတ်သကြားဓာတ်အပြင်အခြားပါဝင်သည့်အရာများမှာ - အသီးဖျော်ရည်အရည်များ၊ အနံ့အရသာများ၊ အက်စစ်ဓာတ်များ၊
ငါတို့ရေထဲမှာရှာနေတာကငါတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဓာတ်သတ္တုတွေကိုရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင်ဖြည့်ပေးတယ်။ အလွန်အထူးအခြေအနေများအောက်မှလွဲ။ ရေသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားအစားအစာများကိုမပေးသင့်ပါ။
တံဆိပ်များပေါ်တွင်ကျန်းမာရေးသတင်းစကားများကိုရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်တို့သတိထားရမည်။ အားတက်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးသောမက်ဆေ့ခ်ျများဖြင့်မလှည့်ဖြားပါနှင့်, detoxified သို့မဟုတ်မျှမျှတတ, သောက်၏ function ကိုဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်။
အရသာအရှိဆုံးရေ - အိမ်လုပ်အရသာရှိသောရေ
ငါတို့သည်လည်းတီထွင်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် မွှေးသောနံ့သာမျိုးသစ်ကိုစမ်း။ ငါတို့အိမ်၌ရှိသည့်သစ်သီးဝလံသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ကိုစားပါ အဘယ်သူသည်ပုပ်နေသောအကြောင်းကို။
ဤအခြေခံ3စည်းမျဉ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါကကျွနု်ပ်တို့၏နွေရာသီအတွက်ကျန်းမာ။ လန်းဆန်းစေသောအချိုရည်များရရှိလိမ့်မည်။ နှင့်ငါတို့သူငယ်ချင်းများနှင့် guests ည့်သည်များအံ့သြဖို့ကြီးစွာသောလန်းဆန်း!
1 ။ ရေသာအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ရမည်
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းသည်ရေ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေကိုသုံးလိုလျှင်ဖြစ်သင့်သည်။ ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ အရသာပိုမိုရရှိရန်အတွက်မသောက်မီအနည်းဆုံး 12 နာရီဖြစ်ရမည်။ အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုမီ, ငါတို့လတ်ဆတ်သောစောင့်ရှောက်ရန်ရေခဲ Cube ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
2 ။ ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအသီးများအားလုံးတရားဝင်သည်
Lemon, Orange, Lime, Lime, Pineapple, သရက်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီသို့မဟုတ်အခြားသင်နှစ်သက်သောအသီးများ။ သူတို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးအိုးကြီးတစ်လုံးထဲထည့်လိုက်။ အပိုင်းပိုင်းငယ်လေ၊ ပိုကောင်းလေ။ ထို့အပြင်ဖျော်ရည်များ၊ Raspberry သို့မဟုတ် blueberries စသည့်အရည်ရွှမ်းသောအသီးများသည်ဖျော်ရည်များနှင့်မွှေးကြိုင်သောအရာများပိုမိုထွက်ပေါ်လာစေရန်အနည်းငယ်မျှနှိပ်စက်နိုင်သည်။ သခွားသီး၊ မုန်လာဥနီသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့်ပေါင်းစပ်မှုကောင်းကောင်းရလိမ့်မည်။
3 ။ နံ့သာမျိုးနှင့်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုထည့်ပါ
အမွှေးအကြိုင်နှင့်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်သစ်သီးဝလံများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလတ်ဆတ်မှုနှင့်အရသာကိုပိုမိုပေးသည်။ လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ပူစီနံ, ပင်စိမ်း, ပညာရှိ, parsley, etc), အရွက်အချို့ကိုဖြတ်ပြီးအသီးများနှင့်တိုက်ရိုက်ရောထွေးပါ။ သစ်ကြံပိုး၊ cardamom၊ လေးညှင်းပွင့်သို့မဟုတ်ဂျင်းစသောနံ့သာမျိုးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုတ်ရည်ကိုပြုလုပ်ပြီး၎င်းပူသည့်အခါထည့်ပါလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရသာရေကိုပြင်ဆင်ချင်ပါသလား သငျသညျမွငျသကဲ့သို့, ဤအချိုရည်အသီးများနှင့်သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုလုပ်သည့်အခါဓါတ်ကိုပြန်လည်ဖို့ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြ၏။ ဖြစ်နိုင်သည့်အခါသကြားနှင့်အခြားပါဝင်သည့်အချိုရည်များကိုရှောင်ပါ။
သက်ရှိအားလုံးသည်အသက်ရှင်သန်ရန်ရေလိုအပ်သည်။ အိမ်တွင်အရည်အသွေးရှိသောရေကိုသောက်သုံးရန်အတွက်ဤနည်းလမ်းသည်သင့်အားကျန်းမာသောကိုယ်ခန္ဓာရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Read more »
the post ရေချို - သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ ပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ.
သင်၏ကာကွယ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်3ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ Creams - သင့်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေ